Banyere akwụkwọ akụkọ - "Usoro nduku" Akwụkwọ akụkọ
Isi Banyere Magazine
Ozi-gbasara nyocha interregional magazine "nduku usoro"
Naanị mbipụta na Russia nke na-aghota ma na-eme ka a ghọta ihe gbasara ịkụ, nchekwa, nhazi na ire nke poteto na akwụkwọ nri "borsch set". Magazin ahụ na-eme ka ahụmịhe nke ndị nrụpụta Russia kachasị mma na mmezu nke ndị ọkachamara si mba ọzọ.
Ndị na-ege ntị nke mbipụta a bụ ndị isi nke ụlọ ọrụ ugbo nke ọkwa dị iche iche; ndị na-akọ banyere ọrụ ugbo; ndị isi nke ọchịchị mpaghara na nke mpaghara, ngalaba ngalaba na-akọ ugbo; ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ na-ekere òkè n'ahịa ugbo; ndị sayensị; ụmụ akwụkwọ nke mahadum ọrụ ugbo.
A na-ebipụta magazin ahụ ugboro anọ n'afọ.
Na 2021, a ga-ewepụta mbipụta 4 nke akwụkwọ nduku.
Nke 1, ụbọchị ntọhapụ: February 25
Nke 2, ụbọchị ntọhapụ: June 2
Nke 3, ụbọchị ntọhapụ: September 8
Nke 4, ụbọchị ntọhapụ: November 19
A na-ekesaa akwụkwọ ahụ na ngosipụta pụrụ iche na ntinye aha. Kemgbe 2015, ndị editọ bidoro oru ngo "Magazine n'efu", ekele nke ugbo Russia ọ bụla nke na-akụ mkpụrụ nduku nwere ohere ịnata “sistemu nduku” n'ụzọ ezubere ọnụ na enweghị ego. Kemgbe ahụ, ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha na-arị elu nke ukwuu.
Ala ekesa - Russia dum, ngwa maka ịdenye aha mgbe niile sitere na ugbo na Trans-Urals, Altai Territory, Far East na Republic of Crimea, mana isi akwụkwọ ọgụgụ bụ ndị bi na mpaghara “nduku” (Moscow, Nizhny Novgorod, Bryansk, Tula na mpaghara ndị ọzọ; Republic of Chuvashia na Tatarstan).
Ndi Federal Service for Supervision of Communications, Teknụzụ Ozi na ụzụ Nkwukọrịta edenye aha n'akwụkwọ a. Asambodo PI Nke FS77 - 35134 nke emere na abali iri-abuo n’onwa iri n’afọ 29.01.2009
Onye guzobere na onye na-ebipụta akwụkwọ: Aglọ ọrụ LLC Agrotrade
Onye isi edemede: O.V. Maksaeva